I-Geoinformatics 1: Ukujonga kude kude-iGeofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/I-Geoinformatics 1: Ukujonga ukude
ArcGIS-ESRIGeospatial - GISTopography
I-Geoinformatics ifika kuhlelo lwayo lokuqala luka-2010, kugxininiso olomeleleyo kwimizwa ekude. Nangona unyaka umncinci, kubonakala ngathi ii-editions ezilandelayo ziya kuwugcina lo mgca, kubandakanya kulo msitho zimbini ze-greats zecandelo elingahlawulelwayo: i-ERDAS kunye ne-ENVI.
Ukuba izinto zinje njengoko ndicinga zona, kumahlelo alandelayo baya kwenza uphononongo lwezixhobo, kumxholo woluvo olukude, isifundo apho icandelo lasimahla liqhubele phambili kakhulu. Banokuthathela ingqalelo amathala eencwadi SEXTANTE phantsi kweendlela zokudibanisa kunye nezixhobo zokusetyenziswa mahhala (gvSIG, iDig, Grass, njl.).
Ndiyincoma ukufunda, nakhu izicebiso:
Xa izixhobo ezikude kunye ne-SIG zifumaneka.
Ludliwanondlebe olunomdla noRolf Schaeppi, usekela-mongameli we-ITT kwimisebenzi yaseYurophu. Udliwanondlebe luqhutywa nguEric Van Rees ngokwakhe, oqale wacela uphononongo olufutshane lwe-ENVI, kodwa njengoko imibuzo iqhubeka, izihloko ezinje:
Ukuhlanganiswa kwe-ENVI EX kunye ne-ArcGIS, eyenza usebenziswano phakathi kwamaqonga omabini, ukukwazi ukusebenzisa ama-specialties kwaye ngaphandle kokulahlekelwa izinto endleleni, njengezitayela kunye nemiqondiso.
Emva koko uvale ngombono wakhe phakathi kwe-GIS kunye ne-Remote Sensing, izihloko ezidibeneyo ngokuncinci, njengoko imifanekiso ifinyelele kwisisombululo esiphezulu.
I-ERDAS, yintoni ojolise kuyo kwi-2010?
Udliwano-ndlebe no-Mladen Stojic, i-Erdas yokuThengisa isekelwe kwimimiselo eqwalaselwa kwishishini ukuba le mveliso ikwazi ukubeka kakuhle.
Phakathi kwezihloko, khankanya inqobo ye-5D yokuba iinkqubo zibheja, kubandakanya: X, Y, Z eyamkelwa ngokwesiqhelo, ukongeza ixesha kunye nedatha ehambelana nayo. Emva koko yenza enye i-blah blah kunye nokusingathwa kwedatha kwi-its Digital Digital.
Udliwano-ndlebe luba lukhulu kakhulu, kuba ezinye ze mibuzo zibanzi, kodwa azininzi kakhulu ukuba zisebenzise oko ziqwalasela imilinganiselo kunye nendlela yabo yefu.
Jack Dangermond unikeza ukuqhubeka nodliwano-ndlebe nomnye wabafundi bakhe edlulileyo, Ithetha ngeGeodeign kunye nesidingo sokuba sicinge nge-georeference ngalo lonke ixesha siza kwenza into. Kulungile kakhulu, ngokuya kuthi ngo-2011 kusigcine sonwabile, njengoko umbono we-BIM uthathelwa ingqalelo ngokubaluleka yonke imihla, kwaye ukuba ubuqaqawuli beli sibane buyalukhuthaza olu gxininiso lulungele wonke umntu.
Kuhlala kubonakala ukuba babhekisela kwinto ephilileyo, okanye kwiingcamango zabo zemigangatho esekelwe "yenza okufana ne-ESRI", Kodwa andikuxeleli ukuba isebenza njani.
Kukho inqaku elinobunzulu kakhulu kwiinkqubo zemephu ezihambayo, enefashoni kakhulu mva nje, ezinye iziganeko zibandakanyiwe, ezinje nge-FIG-2010 International Surveyor Congress, kunye neLeica HDS esandula ukudlula. Intengiso: uyolo, nantsi isampulu.
Jonga u papasho
Elinye nexesha elifanayo ...
Kwakumalunga nexesha, sihlobo, olikhankanyileyo, nkqu ecaleni, igama elithi Remote Sensing ... 🙂